Ku rakib VirtualBox Ubuntu 18.04 LTS iyo derivatives | Laga soo bilaabo Linux
VirtualBox waa barnaamij adeegsiga Oracle ah oo loogu talagalay in lagu abuuro mashiinno casri ah. Iyada oo mashiin dalwaddii, socodsiin kara nidaam hawlgal ahaan barnaamij ahaan nidaamka ay hadda ku shaqeeyaanl. Waxay la mid tahay kumbuyuutar kumbuyuutar ku dhex jira.
Tan asal ahaan waxaa loogu yeeraa mashiin dalwaddeed maxaa yeelay iyagu waa ku dayashada nidaamyada kale ee ka hawlgala, laakiin dhab ahaan la falgalka nidaamka sida nidaamka qalliinka dhabta ah uu sameyn lahaa.
Mid ka mid ah siyaabaha loo wada isticmaali karo labada OS ayaa ah in lagu kaydiyo labada Windows iyo Linux. Waxay u shaqeysaa si fiican, marka laga reebo inaad ku wareejiso nidaamka qalliinka adoo dib u furaya nidaamka. Tani waa wax aan ku habboonayn ilaa xad.
Si kooban, Qalabka mashiinka kumbuyuutarka ah, waxaad u isticmaali kartaa Windows barnaamij ahaan Linux. Si ka duwan codsiyada caadiga ah, waxay cuni doontaa RAM badan. Sidan oo kale, waxaad ku isticmaali kartaa barnaamijyo iyo barnaamijyo ku takhasusay Windows-ka gudaha Linux, adigoon u baahnayn inaad ku rakibto Windows gebi ahaanba.
1 Maxaa ku cusub VirtualBox
2 Sidee loo rakibaa VirtualBox 5.2.10 Ubuntu 18.04 LTS iyo derivatives?
Maxaa ku cusub VirtualBox
Taasi waa sababta VirtualBox ay u tahay codsi caan ah oo loo oggol yahay inuu yeesho labadan, hadda dalabku wuxuu ku jiraa nuqulkiisa 5.2.10 kaas oo ka kooban sixitaanka soo socda:
VMM: Jeeg tilmaam tilmaame aan jirin oo maqan oo kujira summada MMIO
Kaydinta: Lagu rakibay ilaaliyaal badan oo NVMe ah oo ICH9 karti leh
Shabakad: Ogaanshaha wireless-ka oo go'an ayaa dib loo rogay markii lagu xirayo adapters-ka leh borotokollada madaxbannaan ee IP
Shabakad: go'an VERR_INTNET_FLT_IF_NOT_FOUND markay iskuxirayaan adapters-ka qaar ka mid ah martigaliyayaasha Windows
Codka: Duufaan go'an oo go'an oo ku socota martida FreeBSD ee HDA
Kiiboodhka - Soo bandhigtay dib udhac yar oo lagu dayactirayo softiweerkii hore ee filaya inuu awoodo inuu akhriyo nambarka skaanka imanaya wax kabadan hal jeer
Rakibidda Windows: Waa laga saaray ficilkii "Ilows" haddii ay dhacdo in rakibidda VBox ee hadda ay weli sii socoto maadaama casriyeynta (guuleysatay) aysan shaqeyn doonin illaa iyo inta dib-u-dhiska martida loo sameynayo
NAT: Wax ka qabta magac bixiyaha 0.0.0.0 kaas oo ah qaabeyn ansax ah
BIOS: Adeegga INT 15h / 87h waa inuu joojiyaa albaabka A20 markuu dhammaado
Ku darista martida Linux: hagaaji shil adigoo bilaabaya KDE Plasma
Sidee loo rakibaa VirtualBox 5.2.10 Ubuntu 18.04 LTS iyo derivatives?
Codsiga Waxaan ka heli karnaa gudaha keydka rasmiga ah ee Ubuntu laakiin maxaa yeelay arjiga ayaa dhowaan la cusbooneysiiyay oo ka sarreeya dhammaan Iyada oo isbeddelada joogtada ah ee ay leedahay, way nagu yara adag tahay inaan helno nooca ugu dambeeyaye keydka rasmiga ah.
Taasi waa sababta si loo rakibo arjiga waxaan leenahay labo wado:
Midka hore waa iyadoo la soo degsado xirmada deynta ee ay naga siiyaan bogga rasmiga ah ee mashruuca oo aan kari karno halkan ka hel.
Sameeyay soo dejinta Kaliya waa inaan ku rakibnaa xirmada maamulaha dalabka aan doorbidno ama waxaad sidoo kale ka sameyn kartaa terminal adigoo amarka soo socda ah:
Qaabka labaad waa iyada oo loo marayo keyd rasmi ah codsiga oo aan ku dari karno nidaamkeena amarrada soo socda.
Kaliya waa inaan furnaa terminal oo aan fulino waxyaabaha soo socda.
Marka hore waxaan ku darnaa bakhaarka nidaamka leh amarkan:
Hadda waa inaan soo dejino furayaasha oo ku dar nidaamka:
Waxaan ku cusbooneysiineynaa keydadka nidaamka:
Hadda waa inaan ku rakibnaa xoogaa ku tiirsanaan ah daruuri shaqeynta saxda ah ee VirtualBox ee nidaamkeena:
Finalmente waxaan ku rakibi karnaa arjiga amarkan:
Marka rakibida la dhammeeyo, waxaan fulin karnaa amarkan si aan u xaqiijino in rakibida lagu guuleystay, taas oo aan ku heli karno jawaab celin nooca VirtualBox lagu rakibay.
Kahor intaanan bilaabin isticmaalka dalabka, waxaa muhiim ah in la ogaado in ay waajib tahay in aan karti u yeelano qaybta "VirtualMache" ee ku jirta BIOSkeena, maxaa yeelay hadaan arintu sidan ahayn, ma awoodi doonno inaan ku isticmaalno VirtualBox kumbuyuutarkayaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ku rakib VirtualBox Ubuntu 18.04 LTS iyo derivatives
Waa inaad ogaataa inaad khaladaad dhowr ah ku leedahay lambarrada aad bixiso:
Waxyaabaha soo socdaa waa xeerar sax ah oo lagu beddelayo midka dheer ee mid gaaban:
Ku jawaab Rafael Domínguez Losada
Ku kaydso galka gurigaaga Ubuntu 18.04